मान्छे किन धनी हुन चाहन्छ ? - Tamang Online
मान्छे किन धनी हुन चाहन्छ ?
एक पटक मेरे साथीले छोरालाई भन्नु भएछ, अब अलि व्यवस्था गर्नु पर्यो। सधै आजको लागि मात्र विचार गरेर भएन। भोलिका लागि पनि त चाहियो। बाबुले भन्न नसक्दै छोरा बाट उत्तर आइहालेछ। हामीले जति कमाए पनि धनी कहिल्यै हुन सकिदैन। त्यस कारण पुग्न नसकिने बाटो जानु भन्दा त्यतातिर जांदै नजानु राम्रो भनेपछि उहाँको चित्त बुझेछ। त्यसपछि यो विषय बारे सधैका लागि बन्द भएछ।
हुन पनि हो निरन्तर रुपमा अघि बढी रहने विषयको पुग्ने ठाउँनै हुँदैन। जति गएपनि त्यो गन्तव्य कहिल्यै भेट्न सकिदैन। त्यसकारण यसता असफल प्रयासमा लाग्नु भन्दा नलाग्नु नै बेस। यसो भन्दा पनि यो दार्शनिक विचार जस्तो देखिन आउँछ होला। यद्यपी मानिसले यस बारे गहन रुपमा विचार गर्ने हो भने व्यर्थमा समय खेर नफाले हुन्छ।
धनी हुन चाहने प्रवृत्ति शहरको तुलनामा ग्रामीण भेगमा बढी भएको देखिन्छ। शहरमा धेरै मानिस हुने र सबैको अबस्था बुझ्न पनि नसकिने भएको ले नै हुन सक्दछ। विभिन्न मानिसबीच को धनी भनी एकिन गर्न त सबैको सम्पत्तिको जानकारी हुनु नै पर्यो। तर शहरमा सामान्य किसिमबाट तुलना गरी छुट्याउने कार्य कठिन हुने गर्दछ।
यो तृष्णा अथवा चाहना फरक फरक हुने गर्दछ। एउटा जो कोही जग्गा, जमिन, घर नहुनेको तृष्णा गास, बास र कपास भए पुगि हाल्छ। तर आधारभूत आवश्यकता उपभोग गरिरहेको मानिसलाई उपल्लो दर्जाको सुविधाको चाहना तर्फ आकर्षित भएको हुन्छ। मानिस विवेकशील भएको हुँदा उ महत्वाकांक्षी पनि हुन्छ। महत्वाकांक्षी नहुने हो भने उसको प्रगति पनि हुन सक्दैन। किन मानिसले आफ्ना चाहना बढाउँदै धनी हुन चाहन्छन् भन्ने बिषयमा तलका प्रकरणमा केही उल्लेख गरीएको छ।
धनी हुनु भनेको अरुले इज्जत गर्नु वा समाजमा प्रतिष्ठित हुनु हो भन्ने विचारको विकास भएको देखिन्छ। धनी नभइ सम्मान र इज्जत नहुने भन्ने भावनाले गर्दा नै मानिसको भिड त्यसतर्फ केन्द्रित हुन पुगेको छ। जसरी पनि धनी हुने विचारले गर्दा समाजमा विकृति र अपराधले ठाउँ लिन थालेको छ।
धनी भएकै कारणले गर्दा मानिसले भौतिक सुविधाको उपभोग गर्न पाउँछ। जीवन आनन्दमय हुने गर्दछ। ऐस आराम, शुख सुविधा प्राप्त गर्छ। मान, मर्यादा, इज्जत पनि बढेको हुन्छ। यो कारणले गर्दा पनि मानिस धनी भएर अरु भन्दा भिन्न हुन चाहेको हुन्छ।
सहरको कुरा गर्ने हो भने अझ धेरै डरलाग्दो हुँदै गएको देखिन्छ। व्यापारमा मूल्य वृद्धि, कमगुणस्तरका सामान, कर छली, अवैध व्यापार, चेलीबेटी बेचबिखन आदि असंख्य उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यसरी धनी हुने चाहनाले हाम्रो समाजको संरचनामै प्रतिकूल प्रभाब पारी रहेको हुँदा समयमा नै हामी सबै मिली हाल देखिएको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सक्नु नै आजको आवश्यकता हो भन्न सकिन्छ।
« फाल्गुनन्द जयन्तीमा स्थानीय तहले दियो सार्वजनिक बिदा (Previous News)
(Next News) थाइल्यान्ड हिँडेका मुख्यमन्त्री राई किन सुटुक्क अमेरिका ? »